HGH Thailand - Ansomone 100 IU Somatropin HGH na Thailand
Ịgachi price 9,000.00 ฿ Sale
Recombinant Ọganihu Ụmụ Mmadụ Hormone maka Ọgwụ
(Somatropin / HGH, rDNA Amalite)
Ansomone® bụ ụdị nke na-adịghị ahụkebe, nke mebiri emebi nke Recombinant Human Growth Hormone (HGH) na 191 amino acids, nke sitere na injinia E.coli, ọ dịkwa ka hormone na-eto eto na usoro amino acid na usoro atọ. A na - egosi Ansomone® maka ịda mbà n'ihi ụda hormone nke na - eto eto na - eto eto (GHD) na ọrịa Turner ma ọ bụ akụrụ akụrụ. A na-eji Ansomone® mee ka ahụ ọnyá ahụ ma ọ bụ mebie ọnyá ma ọ nwere mmetụta dị mma maka ichebe maka mmadụ ịka nká. A na-akwado osisi ndị anyị na-emepụta nke Ansomone® maka GMP Standard site na sFDA.
Aha aha: Akwukwo hormone nke mmadu na-emeghari maka ogwu.
Ahịa aha: Ansomone®
Ngwakọta dị ka a pụrụ isi kwuo ya: Mmiri hormone na-eto eto.
NDỤMỌDỤ NA NCHỌDỤ
Ansomone® na-eme otu ihe ahụ nke hormone na-eto eto. O nwere ike ime ka e nwekwuo oke na ngbanwe nke epiphysis chondrocyte, na-eme ka uto nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nke cartilage na-akpali, na-akpali mmụba na ọdịiche nke osteoblast; si otú ahụ mee ka ọnụ ọgụgụ na-eto eto na-emewanye ma melite obosara epiphysis. Ansomone® nwere ike ịkwalite njikọ protein n'ime ahụ dum; gbanwee njigide nitrogen na-ezighi ezi kpatara ọnya na ịwa ahụ; dozie hypoproteinemia n'ihi ọrịa siri ike ma ọ bụ hepatocirrhosis; na-akpali nkwenye nke ụbụrụ na-agbasaghị na lymphadenoid, macrophage na lymphocyte, si otú ahụ mee ka ikike nke ọrịa na-eguzogide ọrịa dịkwuo mma; na-akpali mmụba nke collagenocyte, fibroblast na macrophage na saịtị nke ọkụ na ịwa ahụ, si otú ahụ mee ka ngwọta na-emerụ ahụ; akwalite njikọ nke cardiocytes, si otú a meziwanye nkwado nke obi mmadu ma belata onodu oxygen; na-edozi lipometabolism, si otú ahụ na-ebelata cholesterol na ọbara na larịị lipoproteins; mejuputa insufficiency ma ọ bụ erughi nke ibu hormone, ịchịkwa ndị okenye lipometabolism, osteometabolism, obi na akụrụ ọrụ.
A na-akọ na enwere ike ịmalite ịmepụta ọgwụ na ntanetị site na subcutaneous (sc) maọbụ intramuscular (IM). Ọ bụ ezie na sc pụrụ ime ka GH dị elu na plasma, IM nwere ike ịpụta otu ọkwa IGF-l ahụ. GH absorption bụ dịtụ nwayọ, Cmax na-emekarị na 3-5 awa mgbe ejiri ya. Ịhapụ GH bụ site na imeju na akụrụ, ọkara ndụ nke nkwụsị bụ maka 2-3 awa. GH na-enweghị ike ịchọtara na urea bụ ihe a na-apụghị imeri emeri. GH niile na-agbanwe usoro dị ka ụdị dị mgbagwoju anya na GH na-edozi protein nke na-eme ka ọkara ndụ GH gbatịkwuo.
A na-egosi Ansomone® maka ọdịda ọdịda nke ụmụaka n'ihi ụda hormone na-eto eto (GHD).
- Ike elu
- Ogologo ọnọdụ
- Nchebe Cell
- Kwalite Cholesterol Prodfile
Mgbe emeghachite 1 ml mmiri na-enweghị isi maka ọgwụ ogwu a ga-etinye ya na mgbidi mgbanaka ahụ, gbanye mgbanaka ahụ na ntụgharị ihu dị nro ruo mgbe etinyere ọdịnaya ahụ kpamkpam, atụla jijiji.
Ngwado usoro a na-atụ aro nke Ansomone® maka ọgwụgwọ ọdịda ụmụ na-eto eto bụ 0.1 ~ 0.15IU / kg kwa ụbọchị maka usoro 3 ruo 3 afọ. A pụrụ imezi usoro ọgwụgwọ dị ka ndị dọkịta maara ahụ si atụ aro.
Ngwado usoro a na-atụ aro nke Ansomone® maka ọgwụgwọ ọkụ dị ọkụ bụ 0.2 ~ 0.14IU / n'arọ nchịkwa subcutaneous kwa ụbọchị maka izu 2.
Mmiri hormone nwere ike ime ka hyperglycemia na-agafe agafe; enwere ike weghachite ya dịka nchịkọta ahụ gachara ma ọ bụ kwụsị.
Mmeghachi omume na-adịghị mma mere na 1% nwa obere ụmụaka na-ekpe ikpe. Mmeghachi omume na-emekarị na-agụnye obere ihe mgbu, mkpịsị ụkwụ, ọgba aghara gburugburu ebe ogbugba na ederede edere, arthralgias. Ihe niile mmeghachi omume ndị a na-emekarị mgbe ha malitere ịgwọ ọrịa, ha na-adịkwa anụ ahụ ma na-echekwa. Ọchịchị ogologo oge na nnukwu usoro nhazi nke rhGH nwere ike ịmepụta ọgwụ nje na ndị ọrịa ole na ole. Otú ọ dị, ọnyà iyi egwu nwere ike ọ gaghị adịkarịrị elu dị ka 2 mg / L nke nwere ike imetụta ahụike ọgwụgwọ.
1. E kwesịghị iji Ansomone® mee ihe na ndị ọrịa bụ ndị e mechibidoro epiphysis.
2. E kwesịghị iji Ansomone® mee ihe n'ọrịa ọrịa cancer na-arụsi ọrụ ike. A ghaghị ịkwụsị ọgwụgwọ GH ma ọ bụrụ na ihe àmà nke neoplasia na-amalite.
3. E kwesịghị iji ọgwụ Ansomone® mee ihe n'ebe ndị ọrịa na-enwe nnukwu nsogbu na-ebute ọrịa.
AKA NA NKWUKWU
1. A ghaghị imezi ọgwụgwọ rhGH na ndị ọrịa GHD a chọpụtara kpọmkwem dịka ndụmọdụ nke dọkịta nwere ahụmahụ.
2. Maka ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga, a ghaghị gbanwee usoro ọgwụ ndị na-egbochi glucourea n'oge ọgwụ rhGH.
3. Maka ndị ọrịa GHD kpatara ọrịa ma ọ bụ ọnyá obi, ọganihu na nlọghachite omume nke ọrịa ndị a ga-enyocha anya.
4. Maka ọrịa ndị na-adịghị na ACTH, a ghaghị gbanwee usoro nke ATCH n'ihi na a pụrụ igbochi ọganihu nke rhGH nwere site n'iji ACTH mee ihe.
5. A ghaghị ịnwale ọrụ gị na-eme ka ọkpụkpụ gọọmenti ugboro ugboro n'ihi na ọrịa hypothyroidism nwere ike ịdabere na ụfọdụ ndị ọrịa n'oge ọgwụ rhGH. Maka ndị ahụ hypothyroid, gịroid supplementation dị mkpa iji hụ na ịgwọ ọrịa rhGH.
6. E kwesịrị ilebara nlezianya anya ma ọ bụrụ na ịme ihe na-eme n'oge ọgwụgwọ rhGH n'ihi na ndị ọrịa ndị na-arịa ọrịa endocrine (tinyere GHD) nwere ụdị nke a nke na epiphysis plates of femur dị mfe ịhapụ.
7. Mkpụrụ hormone nke na-eto eto nwere ike iduga na steeti insulin, a ghaghị akwụ ụgwọ anya ma ọ bụrụ na obere glucose enweghị ndidi.
8. Ejila rhGH mee ihe, otu oge rhGH nlekọta nwere ike iduga shuga shuga ma merie ọbara ọbara dị elu. Ọchịchị rhGH ogologo oge n'ogologo nwere ike iduga acromegaly.
9. Ebe ogwu ogugu kwesiri ime mgbanwe di na lipoatrophy.
NDỊ NA-EKWU NDỊ NA-EBE NWA NA NWA
A gaghị atụ aro ka ụmụ nwanyị dị ime na ndị nọọsụ nakweere ọgwụ rhGH.
Nzaghachi nye ụmụaka dịka nke ndị toro eto na nkà mmụta ọgwụ, na toxicology na pharmacokinetics, rhGH adịghị mma maka iji ụmụaka.
Nzaghachi nye rhGH ndị ọrịa ochie yiri nke ndị okenye na nkà mmụta ọgwụ, na toxicology na pharmacokinetics, rhGH adịghị mma maka iji geriatric mee ihe.
A ga-egbochi glucocorticoid mmeghachi omume na ọgwụ rhGH, nke mere na usoro hydrocortisone ga-adị ala karịa 10 ~ 15mg / m2 nke anụ ahụ n'oge ọgwụ rhGH.
Imiri oge na-eji nke steroid na-abụghị orrogenic n'oge ọgwụ rhGH nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ dị elu.
Enwebeghị akụkọ banyere ọtụtụ usoro rhGH; Otú ọ dị, n'elu usoro onunu ogwu nwere ike ime ka o nwee mmetụta ụfọdụ, dịka hypoglycemia na mbido wee merie hyperglycemia. Ogologo oge n'elu usoro onunu ojiji nke rhGh nwere ike iduga acromegaly.
Nọgide na 2 ~ 8ºC pụọ na ìhè. Ngwurugwu a gbakwunyere na Mmiri Sterile maka ịṅụ ọgwụ ka a ga-echekwa na 2 ~ 8ºC maka oge 48, echefula.